बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थ मन्त्रीले ढाँटे, विद्युत उत्पादन, आयात र खपतकै तथ्यांक गलत - UrjaKhabar बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थ मन्त्रीले ढाँटे, विद्युत उत्पादन, आयात र खपतकै तथ्यांक गलत - UrjaKhabar
विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :१०४२४ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :११९१२ मे.वा.घन्टा / भारत : ५२९० मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा / माग :२७६२६ मे.वा.घन्टा
लिवर्टी इनर्जीले भदौ ३ देखि साधारण सेयर...
दुर्गम गाउँमा घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट विद्युतीकरण...
तल्लाे लिखु र लिखु-४ लाई गाउँपालिकाले भन्यो...
बूढीगण्डकी प्रभावित फेरि आन्दोलित, तत्काल बाँकी मुआब्जा...
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थ मन्त्रीले ढाँटे, विद्युत उत्पादन, आयात र खपतकै तथ्यांक गलत
काठमाडौं । सरकारले बुधबार (माघ २९ गते) चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्यो । अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारले गरेका काम र खर्च विवरण पेश गरिरहँदा विद्युत क्षेत्रको भने गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्री खतिवडाले सुरुमा विद्युत उत्पादन वा जडित क्षमता १ हजार ३ सय ४३ मेगावाट पुगेको बताए । यो कसरी पुग्यो ? सरकार र निजी क्षेत्रको उत्पादन कति तथा वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतबाट कति उत्पादन भयो भन्ने बताइएन ।
जबकि, अहिलेसम्म उत्पादित विद्युत ग्रिड र अफ ग्रिडको सोहोरसाहर पार्दा करिब १३ सय २७ मेगावाट पुग्छ । खतिवडाले गोलमटोल तथ्यांक प्रस्तुत गरेर सर्वसाधारण र सरोकारवालालाई भ्रम छर्ने काम गरेको देखिन्छ ।
विद्युत उत्पादनमा सरकारी र निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेख गरेको भए विश्वसनीय हुन्थ्यो । तर, सरकारले जबर्जस्ति काम भएको देखाउन सर्वसाधारणलाई झुक्याउँदै आएको हुँदा वास्तविकता पेश गर्ने कामै गरेन ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म सरकारले (प्राधिकरण) ६ सय ३५ मेगावाट र निजी क्षेत्रले ६ सय ३६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेका छन् । प्राधिकरणले उत्पादन गरेको मध्ये साढे ४ मेगावाट अफग्रिड (प्रसारण लाइनबाहिरको) हो ।
उता वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत उत्पादन भएको लघुजलविद्युत, सौर्यविद्युतको परिमाण करिब ५५ मेगावाट देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा यी शीर्षक वा उत्पादकले के कति थप गरे वा गरेनन् भन्ने उल्लेख गरेको भए सरकारले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकमा विश्वास गर्न सकिन्थ्यो ।
यसैगरी, खतिवडाले गत वर्षभन्दा समीक्षा अवधिमा भारतबाट विद्युत आयात २० प्रतिशत घटेको बताए । यो अर्को महाझुट हो । के कति कारणले आयात घट्यो भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । समीक्षा प्रतिवेदनमा त आयात घटेको विषयमा एक लाइन पनि लेखिएको छैन ।
बिहीबार (फागुन १ गते) उच्च माग हुँदा भारतबाट ११३७५ मेगावाट घन्टा विद्युत आयात भएको देखिन्छ । २४ घन्टामा आयात भएको परिमाणको हिसाब गर्दा बिहीबार भारतबाट औसत ४ सय ७४ मेगावाट विद्युत किनिएको छ ।
उच्च माग हुँदा ५ सय देखि साढे ५ सय मेगावाटसम्म आयात भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए । उनका अनुसार सामान्य अवस्थामा पनि भारतबाट साढे ३ सय मेगावाट विद्युत आयात भइरहेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा पनि सोही परिमाणमा विद्युत किनेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
अब खतिवडाले भने जस्तै आयात कसरी घट्यो ? आयात घट्नलाई देशमा प्रचुरमात्रामा विद्युत उत्पादन हुनुपर्यो । देशको विद्युत पर्याप्त हुँदामात्र भारतबाट किन्न पर्दैन । तर, पछिल्लो एक वर्षमा करिब सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत प्रणालीमा थपिएको छैन । यता आन्तरिक मागको अवस्था पनि खासै सुधार भएको छैन । यी कारणले पनि विद्युत आयात गत वर्षकै हाराहारी वा केही बढी नै भइरहेको छ ।
देशको विद्युत पर्याप्त हुँदामात्र भारतबाट किन्न पर्दैन । तर, पछिल्लो एक वर्षमा करिब सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत प्रणालीमा थपिएको छैन । यता आन्तरिक मागको अवस्था पनि खासै सुधार भएको छैन । यी कारणले पनि विद्युत आयात गत वर्षकै हाराहारी वा केही बढी नै भइरहेको छ ।
आजको दिनमा पनि आन्तरिक उत्पादन भन्दा आयातित विद्युतको परिमाण धेरै छ । प्राधिकरणका अनुसार बिहीबार २४ घन्टाको विद्युत आयात र आन्तरिक उत्पादनको अवस्था हेर्दा, सरकारी विद्युतगृहबाट ५७०८ मेगावाट घन्टा (औसत २३८ मेगावाट), निजी क्षेत्रबाट ५२६५ मेगावाट घन्टा (औसत २१९ मेगावाट) उत्पादन भएको छ ।
सोही अवधिमा ६० मेगावाट घन्टा (औसत साढे २ मेगावाट) ट्रिपिङ भएको र भारतबाट औसत ४ सय ७४ मेगावाट आयात भएको देखिन्छ । बिहीबारको औसत विद्युत माग करिब ९ सय ३३ मेगावाट देखिन्छ । तर, उच्च माग १३ सय मेगावाटसम्म रहेको जनाइएको छ ।
औसत आन्तरिक उत्पादन र आयातको परिमाण हेर्दा पनि १७ मेगावाट विद्युत भारतबाट बढी किनिएको छ । उच्च माग हुँदा त ५ सय ६० मेगावाटसम्म आयात हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रीले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक कसरी मिल्यो ? कुन आधारले आयात घट्यो भनिदिएको भए हुन्थ्यो ।
अझ, अर्थ मन्त्रीले प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत २ सय ४५ किलोवाट घन्टाबाट बढेर २ सय ६७ किलोवाट घन्टा (युनिट) पुगेको सुनाए । यसको पनि कुनै आधार छैन । ६ महिनामै प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत २२ युनिट कसरी बढ्यो ?
अर्थ मन्त्रीले प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत २ सय ४५ किलोवाट घन्टाबाट बढेर २ सय ६७ किलोवाट घन्टा (युनिट) पुगेको सुनाए । यसको पनि कुनै आधार छैन । ६ महिनामै प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत २२ युनिट कसरी बढ्यो ?
खपत बढ्नलाई उत्पादन बढ्नुपर्यो । त्यही अनुसार व्यापक विद्युतीकरण गर्नुपर्यो । प्राधिकरणको विद्युतीकरणको काम परम्परागत ढर्राभन्दा बाहिर जान सकेको छैन । विद्युत पुगेका ठाउँमा पनि गुणस्तरीय आपूर्ति छैन । देशका मुख्य सहरमै भरपर्दो आपूर्तिको सुनिश्चितता छैन । यसलाई खपत बढेको तथ्यांकसँग तुलना गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? अर्थ मन्त्रीले प्रस्ट्याइदिएको भए हुन्थ्यो ।
विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको बागडोर समातेर बसेको प्राधिकरणले नै प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत २ सय ३० युनिटभन्दा बढी नरहेको बताइरहेको छ । सरोकारवाला र यस क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विश्लेषकहरूले पनि यही तथ्यांकलाई आधार मान्ने गरेको देखिन्छ । के अर्थ मन्त्रीका आँखाले मात्र बढेको देखाएको हो त ?
जे जस्तो परिस्थिति र परिणाम छ, त्यही बताउँदा सरकार वा मन्त्रीलाई के हुन्छ ? सरकारले उत्पात काम गरेको छ भन्ने देखाउन गलत तथ्यांक, भ्रम र अविश्वास कहिलेसम्म बाँडिरहने ? स्थायी सरकारका यस्ता कपटपूर्ण काम र क्रियाकलाप सर्वसाधारणले कहिलेसम्म बैधानिक मान्नुपर्ने हो थाहा छैन ।
सर्वसम्मत इपान पदाधिकरी घाेषणा राेकियाे, खोलामा पार्टीको झन्डा गाड्नेहरू सल्बलाए
लिवर्टी इनर्जीले भदौ ३ देखि साधारण सेयर निष्कासन गर्ने, १०...
तल्लाे लिखु र लिखु-४ लाई गाउँपालिकाले भन्यो : मालवाहक ढुवानीका...